As Kirati, Author at Kavyalaya - काव्यालय
by As Kirati भदौ १३, २०७७
written by As Kirati
माफ गर्नुस् यस्तो बेला ‘यात्रामा जाऔँ’ भनिरहेको छु ।
तर, तपाईंले त्यति धेरै चाहिँ सोच्न हुन्नथ्यो ! भिड मच्चाउने यात्रा गर्न लागेको होइन क्या ! कोरोना फैलाउने किसिमको पनि गर्न लाग्या होइन ! ओहोहो… कति धेरै अतालिनु भएको ! म भनिहाल्छु नि ! आज तपाईंलाई म यात्रा ;अनिश्चित मा लैजान्छु । गन्तव्यविहीन यात्रामा निकाल्छु । तपाईंले माक्स/स्यानिटाइजर केहीपनि लगाउन पर्दैन । बस् यसरी नै यी अक्षरहरूसँग हुँइकिनुहोस् । लौ त ! अब ‘यात्रा; अनिश्चत’ मा जाऔँ ।
यात्रु सँख्याः ४ केटा (तपाईं बाहेक गन्दा)
यात्रा मितिः ०७७/०४/२७—२९
स्थानः उदयपुर, प्रदेश नं. १
२७ मंगलबार, ०४/०७७
तपाईंले भर्खरै चार केटाहरू चौतारीमा (बेलका न.पा.-५, शिखरमाडी) बसेको देख्नु भएको छ । चौतारी खेलमैदान सँगै जोडिएको छ । र, खेल मैदान जंगल नजिकै छ । ती केटाहरू त्यही जंगलको बाटो हुँदै आएर पानी पिउँदैछन् । गफिँदैछन् । उत्सुकतामा पौडँदैछन् । तपाईंलाई लाग्यो होला यी को होलान् ? जान्नुस् यी को रहेछन् :
२४ साउनका दिन दुई केटाहरू ताजा (फ्रेस) हुन यात्रामा निस्कने सल्लाह गर्छन् । तत्पश्चात ती दुई मध्ये एक केटोले साउन २५ र २६ का दिन यात्रा-गफ थप दुई केटालाई बाँड्छ । ती थप दुईबाट यात्रा पचाउने शत प्रतिशत पक्का हुन्छ । तर, यात्रा अनिश्चित छ । अर्थात् यात्रा-गन्तव्य छैन । र, आफ्नो गाउँ (चौदण्डीगढी न.पा-३, बसाहा)बाट उत्तरपूर्व तर्फ ती चारबाट यस्तो यात्रा शुरू हुन्छ २७ साउनमा ।
अहिले तपाईंले चौतारीमा देख्नु भएको ‘चार’ तिनै हुन्, जो गन्तव्यविहीन यात्रामा निस्केका छन् । आउनुस् पछ्याऔँ ‘चार’लाई ।
खोलो, जंगल र ईश्वरधन बा
चौतारीबाट उत्तरपूर्व २५/३० मिनेट हिँडेपछि धान खेत आइपुग्छ, पूरै तहतह मिलेको । हरियो । लोभलाग्दो । चोरुँ चोरुँ लाग्ने । यसरी हरिया खेतहरू बनाउने जिम्मा लिएको खोलोमा ‘चार’ पुगेर थकानलाई बग्दै आएको पानीमा पखाल्छन् । पसिनालाई बगाई पठाउँछन् । खोलोको चिसो पानीसँग जिस्किन्छन् । रोमाञ्चित हुन्छन् । शान्त हुन्छन् मनमनमा । र, पूर्ण भएपछि लेकै लेक जंगलतिर लाग्छन् । जहाँ बाटो नाम मात्रको छ । हुन त हिउँदमा मोटर चल्ने बाटो रे ! तर, यो वर्षामासमा बाटो खोल्सामा रुपान्तरण भइगएछ । धन्यवाद कसलाई दिने ? वर्षालाई या बाटो जथाभावि बनाउने महानुभावहरूलाई ?
जाऔँ हामी त अगाडि, समय दिउँसोको ११ भइसकेको घडीले देखाउँछ । जंगल कटेर कता जाने त्यो पनि त हेर्नु छ ।
दुई तीन ठाउँमा विश्राम लिएर ‘चार’ले जंगल काटेका छन् । शरीर पसिनाले भिजेपनि मन चिसो हावाले भिज्दै छ । दक्षिणको मनोहर दृश्यले मनमा हर्ष दिँदैछ । उत्तरको हुस्सुले जोश दिँदै छ । तर, हुस्सुझैं जोश घरीघरी थकानबाट मेटिँदै छ । यस्तैमा एक बाले ती ‘चार’लाई विश्राम लिन आँटेको बेला भेट्छन् । ती ‘चार’ बासँग बोल्न थाल्छन् । बाटो सोध्छन् । र, सह-यात्रु हुँदै विश्राम नगरी यात्रमा होमिन्छन् । तर, ती बाको हिँडाइमा ‘चार’लाई हिँड्न मुश्किल पर्छ । पहाडमा हिँडिरहनेलाई कहिल्यै नहिँड्नेले सक्छन् र ! सक्ने गफिँदै बालाई पछ्याउँदै छन् । नसक्ने पछ्याउने क्रममा पछाडि नै छन् ।
पसल हो । तर, रुप त्यस्तो पटक्कै छैन । हुन त गाउँ हो । जहाँ सडक पुगेको छैन । बिजुली छैन । स्वास्थ्य सेवा छैन । शिक्षा, बजार, इन्टरनेट केही केही पनि छैन । हो, यस्तै केही नभएको ( नबनाइएको ?) एक गाउँको पसल (?)मा तपाईं हुनुहुन्छ अहिले । कुनै किनमेल गर्न होइन है फेरि ! मात्र ती चारलाई पछ्याउँदै ।
ती चार किन पसलमा पसेनन् होला ? ‘पस्न नपाउनु र ! खाजा खानु परेन ?’ यो तपाईंको प्रश्न जायज नै छ । तर, ‘चार’ यो यात्रामा किन पसल पस्नुहुन्न कारण थाहा पाइहाल्नुस् !
यात्राको गन्तव्य अनिश्चित छ, यो त तपाईंले थाहा पाइसक्नु भयो । तर, यो भन्दा पनि रोचक ‘चार’ कहिल्यै नपुगेकोे ठाउँमा हुँदैछ यात्रा । यहाँसम्म की ‘चार’को आफन्त समेत नभएको ठाउँमा । त्यति मात्र होइन यो यात्रामा कसैले पनि तलका कुराहरू गर्न पाउँदैनन् । यसो भनौँ, तलका बुँदाहरू यात्राका आचारसंहिता हुन् ।
अ) यात्रा शुभारम्भ पछि रकम खर्च गर्दै नगर्ने
आ) मोबाइल फोन घरमै राख्ने (यात्रामा नलाने)
इ) यात्रामा विशेष कामको लागि लगेको मोबाइल काममा मात्र ‘अन’ गर्ने अरु बेला सधैँ ‘अफ’
आचारसंहिताबाट थाहा पाइ सक्नुभएको छ, यात्रा कम्ता साहसिक छैन ! खैर, यो कुरो यहीँ छाडौँ । बरु यो मधु (मुस्कान) खाऔँ ! अँ साँच्ची, ती ‘चार’ले चाहिँ यो किनेका हैनन् नि ! ती बाले किनिदिएका हुन् । अनि, ‘चार’ले खरिद गर्न पनि लगाएका होइनन् । बा आफैले यो सबै गर्नु भएको हो । त्यति मात्र होइन बा’ले त आफ्नो घरमा लगेर चिया पनि पिलाउने भइसकेका छन् । वाह ! कस्तो मिठो सम्मान । धन्यवाद बा ।
पसलबाट १५/२० मिनेट थप हिँडेपछि बा’को घर पुग्नुहुन्छ तपाईं । जहाँ आमा (बा’की रानी)ले गोठालो जाने बेला भयो, कति ढिलो आ’को भनेर हल्का कराउँछिन् (?) । र, तपाईंलाई जाँड खान आग्रह गर्छन् । तपाईं पटक्कै मान्नुहुन्न । भन्नुहुन्छ,
‘बाटोमा अघि चिया पिउनुस् घरमा पुगेर भन्नु भएथ्यो, चिया पिऔँ बरु । जाँड त मरे खाइन्न !’
त्यसपछि आमाले चिया बसाउन भाँडा तयार पार्नुहुन्छ । हतपत तपाईं जानुहुन्छ आमालाई सघाउन । किनकी तपाईं पकाउन सौखिन हुनुहुन्छ । भान्सामा छिरेपछि तपाईं छक्क पर्नुहुन्छ, किनकी यस्तो गाउँ (विकट ?)मा पनि ग्याँस चुल्हो हुन्छ । सोधपुछबाट थाहा पाउनुहुन्छ कि त्यो ग्याँस चुल्हो ३ घण्टा हिँडेर पुगिने बजार(?) बाट ल्याइएको हो । खैर, जे भए पनि चिया मिठो बनाउनुहुन्छ । आमाले पनि पिउनुहुन्छ । बा भने जाँड मै । मिठो सत्कारपछि तपाईं आभार प्रकट गर्दै ‘चार’लाई पछ्याउनु हुन्छ । पुनः ईश्वरधन बालाई धन्यवाद ।
बाटो(?), खुर्सानी र बास
बा’को घरदेखि पूर्वतिर एउटा विशाल पिपल देखिन्छ । त्यही पिपललाई आजको गन्तव्य बनाएर ‘चार’ बाटो काट्न थाल्छन् । यहाँ त झन् बाटोको र्दुदशा जंगलको बाटोको भन्दा दयनीय छ । गत हिउँदतिर खनिएको बाटो रे यो । तर, अहिले बाटो नभनेर पहिरो भन्न सुहाउँछ । के गर्ने जे जस्तो भएपनि यात्रा रोक्न भएन, अघि बढ्छन् ती ‘चार’ ।
पहिरो-बाटोमा १ घण्टा समय बिताएपछि गोरेटो भेटिन्छ । भनुम् अब पहिरो-बाटो सकियो । बाँकी बाटो यो वर्षको हिउँदमा खन्ने होलान् । र, पहिरो-बाटो थप्ने होलान् ।
पहिरो-बाटो छोडेपछि भेटिएको गोरेटोपनि हराउँदै जान खोज्छ । गोरेटोमा मान्छे एउटा भेटे त ! तपाईंलाई यस बेला लाग्छ, सायद यो बाटो मरिसकेको बाटो हो । जहाँ मानिसहरू यो बाटोको अन्तिम मृत्युसंस्कारमा मात्र आएका हुन् ।
‘चार’ लाई हिँड्न मुश्किल पर्छ । गोरेटो बाटो; कतै माकुराको जालोले छेकेको भेटिन्छ, कतै बुट्यानहरूले । जहाँ गोरेटो छँदै छैन ! नमुना मात्र छ, यो हो की त्यो हो ! अनि, त्यही नमुना बाटोलाई छेकेका/ढाकेका बुट्यानहरूलाई लट्ठीले बेस्मारी हिर्काउँदै/पन्छ्याउँदै ती बढ्छन् । जे होस् करिब २ घण्टाको कडा मिहेनतपछि ‘चार’ सम्भावित बिन्दुमा पुग्छन् । तर, त्यहाँ दुईवटा पिपलका बोट देखिन्छन्, अलि माथि र अलि तल । बा’को घरबाट देखिएको पिपल कुन हो खुट्याउनै सक्दैनन् ‘चार’ले । र, अलि माथि डाँडोमा देखिएको पिपलतिर लाग्छन् त्यो हुन सक्ने आशमा । त्यस पिपलमा पुग्दा आशले आलु खान्छ । त्यसैले पिपलको खोजमा ‘चार’ अझै उकालो चढ्छन् । तर, थप पिपल देखिँदैन ! निकै उकालो चढेपछि ‘चार’ एक ठाउँमा बस्छन् । यस बेलासम्ममा हुस्सुले पूरै छोपिसकेको छ । हुन त समय पनि ५ बज्न लागिसकेको छ । वरपरका डाँडाहरू दुधको पोखरीमा लुकेजस्ता भइसकेका छन् । मुख्य कुरो त ‘चार’ को जिउ पूरै थाकिसकेको छ । र, अब अगाडि बढ्ने कुनै जोश बाँकी छैन ।
यसै बेला एक दाइ देखा पर्छन्, जो बाख्रा थुन्न बाख्रा खोजिरहेका छन् । ‘चार’ ती दाइसँग गफिन्छन् । आफ्नो यात्राबारे बताउँछन् । रात परिसकेको कुरा गर्छन् । र, वरपर समतल परेको उँचो ठाउँबारे सोधखोज गर्छन् (बासको लागि) । दाइबाट गाउँमा जत्ति बास पाइने उत्तर आउँछ । लकडाउनले आफू निकै थलिएको कारण सहयोग गर्न नपाएकोमा दुःख मान्छन् दाइ । तर, गलेको बेलामा अकबरे खुर्सानी र काँक्रा खाजा स्वरुप ‘चार’ले पाउँछन् । भाउजु (दाइकी रानी)बाट । ‘चार’ले मज्जाले खान्छन् । तपाईं पनि खाने की ? हाहा… सायद त्यस खुवाइमा भोकोपन पनि कतै मिसिएको थियो होला !
दाइको घरमा टन्न खाजा खाएपछि बिदा मागेर पुनः ओरालो र्झछन् ती चार । अघि भेटिएको पिपलबाट पनि अझै तल । र, रोकिन्छन् एउटा विद्यालयमा । अब के गर्ने भनेर केहीक्षण सल्लाह गर्छन् । सल्लाह स्वरुप एकपटक नजिकै रहेको घरमा बास माग्छन् । बास पक्का हुन्छ । ‘चार’ फुरुङ्ग हुन्छन् । र, घरधनिसँग मस्त गफिन्छन् ।
२८ बुधबार, ०४/०७७
घडीले बेलुकाको ८ बजाइसकेको छ । सुताइ/खुवाइ कता हुने हो केही ठेगान छैन । मौसम; वर्षा होला होला जस्तो छ । ‘चार’को ज्यान गलेर थकित छ । तर, मनको जोश/जाँगर पटक्कै थकित छैन । त्यही जोश/जाँगरका साथ हिजो बेलुकाझैं आजपनि बास माग्ने योजना बन्छ । तर, पहिलो प्रयास असफल । दोस्रो के हुने अनिश्चित । हुन त सबै अनिश्चित नै हुन्छ । र, अनिश्चिततामा नै काम गर्न रमाइलो हुन्छ । ओहोहो… दोस्रो प्रयास पनि असफल होला जस्तो छ । घरमा ७० साउन कटाएका बा’आमा मात्र छन् । केही क्षण ‘चार’ र घरका बा’बिच कुराकानी हुन्छ । र, पक्का हुन्छ बास ।
सुन्नुस् त, तपाईं झोलो यही राख्नुस् । अनि, जानुस् ‘चार’को आजको यात्रामा ।
आज बिहान तपाईं ७ बज्न लाग्दा मात्र उठ्नुहुन्छ । सायद तपाईं अझ अबेरसम्म सुत्नुहुन्थ्यो होला तर, बास बसेको घरको सानो भाइ आएर ढोका ढकढकाइदियो । शहर जस्तो हो र गाउँ ! अबेरसम्म सुतिरहने ? घरबेटी दाइ तपाईं उठ्दा मेला(काम)मा गइसक्नुभएको थियो । त्यसैले तपाईं अलि लजाउनुहुन्छ । र, हतारमा नित्य कर्म सिध्याउनु हुन्छ । र, आत्मीयताका साथ बिदाइ मागेर ओरालो झर्नुहुन्छ ।
(धन्यवाद छ दुई दाजु र भाउजुहरूलाई)
हिजो आएको बाटो छोडेर दक्षिण लाग्नुहुन्छ । र, हिजै देख्नुभएको पिपलमा जानुहुन्छ । र, छक्क पर्नुहुन्छ । कारण, बा’को घरबाट देखिने पिपल त यो पो रहेछ । यहाँबाट बा’को घर देखेर तपाईं ती बा’लाई पुनः सम्झनु हुन्छ ।
यस पिपल बोटमुनि मज्जाले हावा चलेको कारण ध्यानको लागि उपयुक्त ठाउँ मानुहुन्छ । र, शुरू गर्नुहुन्छ ध्यान/योग ।
वर्षा, गफ र खाना
ध्यान सकेर तपाईं अझै दक्षिण हुँदै ओरालो झर्नुहुन्छ । गाउँ प्रवेश गर्नुहुन्छ । र, गत हिउँदमा खनिएको बाटो (?)मा हिँड्नुहुन्छ । एउटा गिर्जाघर भेट्नुहुन्छ । हेर्न पस्नुहुन्छ । ठूलो संयोगवश ‘चार’ मध्ये एउटा केटोले चिनेको (घर/ठेगाना थाह नभएको मात्र हल्का परिचित) दाइलाई त्यही गिर्जाघरमा भेट्नुहुन्छ । गफिन थालेको केहीबेरमा वर्षा हुन थाल्छ । बच्न गिर्जाघर नजिकैको घरमा उक्त दाइसँगै जानुहुन्छ । त्यहाँ तपाईंले भव्य स्वागत पाउनुहुन्छ । गफिँदै जाँदा खानाको प्रस्ताव आउँछ । स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
त्यहाँँबाट सत्कारिएपछि बिदा माग्दा २ बज्न लागिसकेको हुन्छ । र, तपाईं पश्चिम-दक्षिणतर्फ ७०/८० डिग्रीको ओरालो झर्नुहुन्छ । आधा घण्टा त्यस्तो ओरालो हिँडेपछि एउटा खोल्सोमा ढुँगा फुटाएर/घोटेर दाँत माझ्नु हुन्छ । र, खेतको आली आली हिँड्नुहुन्छ । एकदुई ठाउँ चिप्लेर लड्नुहुन्छ । तर, हिँड्न छाड्नु हुन्न । हिँड्दै जानुहुन्छ ।
जंगल र गफ
खेतको आलीमा कठिन यात्रा गरेपछि तपाईं खोल्सोमा रुपान्तरण भएको बाटो(?)मा पनि हिँड्नुहुन्छ । त्यहाँ बल्ल तपाईंले केही मान्छेहरूलाई भेट्नुहुन्छ । गफिनुहुन्छ । तर, गफिएर तपाईंको काम सकिँदैन । त्यसैले यात्रामा अगाडि बढ्नुहुन्छ ।
तपाईं अहिले जंगलमा हिँडिरहनु भएको छ । यस्तो सुनसान जंगलमा हिँड्दा डराउनु त भएको छैन नि ! यहाँ हिँड्दा नडराउनुस् है ! केही पनि हुन्न । बरु यसो गर्नुस् । कसो भने नि, ती ‘चार’ले यस जंगलमा गरेका गफ सुन्दै यात्रा बढाउनस् । ती ‘चार’ले यस जंगलमा हिँड्दा निवर्तमान प्रेमिका, यौन, मायादेखि लिएर निवर्तमान प्रेमी(?)सम्मका गफ गरेका थिए । तर, यसरी ‘चार’ले अर्काको कुरा गर्न नहुने हो । खैर, बाटो काटेको र समय बितेको त्यसै गफले गर्दा पत्तै पाएनन् । र, त ८ बजेतिर बास माग्न पुगे ।
अरे ! कति अबेर गर्नुभएको आउनलाई ? झण्डै बास नपाइएको । तपाईं पनि ‘चार’को जंगल-गफमा रुमलिनु भए जस्तो छ । यहाँ तपाईंको झोलो छ । तौली झिक्नुस् त लामखुट्टेले टोक्यो !
२९ बिहीबार, ०४/०७७
आज चाहिँ ‘चार’ अलि चाँडै उठ्छन् । ५ पनि नबजेको घडीले भन्छ । ७० साउन कटाएका बा’आमासँग बिदा मागेर पश्चिमदक्षिण लाग्छन् । १ घण्टा हिँडेपछि एउटा खोल्सो छेवैमा बस्छन् । आज यात्राको अन्तिम दिन । त्यसैले यहाँ यात्रा; अनिश्चितको विशेष समापन गर्ने कुरो हुन्छ । र, शुरु हुन्छ-
समयले हामीलाई चलाएको भनेतापनि वास्तवमा हामीले समयलाई चलाएका हुन्छौँ । गल्ती गर्ने/नगर्ने जिम्मा आफ्नै । सुकर्म गर्ने/नर्गने जिम्मा आफ्नै । ती ‘चार’ले त्यस विहान आफ्नो कु-विगत जलाउँछन् प्रतिक स्वरुप पन्नामा लेखेर । हुन त कागज जलाउँदैमा कु-विगत जान्छ/हट्छ भन्ने हैन । एउटा विश्वास/प्रतिज्ञाका साथ कु-विगत जलाएकोले आश छ अब कु-विगत फर्कन्न । र, यसलाई बढाउन चाहिन्छ-
विशेष कर्मपश्चात ती ‘चार’बाट ध्यान/योग कर्म हुन्छ । जुन झनै विशेष छ । खोल्सोको कलकल आवाजमा डुब्दै जाँदा कम्ता आन्नद आउँछ ! आहा ! र, निस्कन्छ-
ती ‘चार’ ध्यानपश्चात गलिन्जेल हाँस्छन् । आँसु आइन्जेल हाँस्छन् । हाँस्नको निम्ति दुःख भुल्छन् । र, एक छुट्टै संसारमा पुग्छन् । जसको निम्ति सबैलाई दिन्छन्-
समापनको अन्तिम कर्म । यात्रा अब केहीबेरमा नै सकिँदैछ । तर, यो यात्रा धेरै मद्दत/सहयोगबाट सम्पन्न हुन आँटेको हो । ती ‘चार’ले यो यात्रालाई सफल बनाउन मद्दत गर्ने सबै-सबैलाई धन्यवाद दिन्छन् । र, यात्रा औपचारिक रुपमा सकिन्छ ।
लु तपाईंलाई पनि बधाई छ है । यात्रा; अनिश्चित सकेर आउनु भयो । जसरी यस यात्रामा तपाईंको कति पनि आय नष्ट भएन । त्यस्तै ‘चार’को पनि यात्रा आचारसंहितानुसार नै चलेको हुनाले एक कौडी आय पनि नष्ट भएन । सबैसबैलाई धन्यवाद ।
by As Kirati साउन १७, २०७७
तपाईंसँग भएको क्यालकुलेटरमा आजको समयबाट १७ वर्ष घटाएपछि जे आउँछ, अहिले हामी त्यहाँ छौँ । ‘ऊ’ दु:ख पाउन ग्रह-पृथ्वीमा भर्खरै पहिलो स्पर्श राख्न सफल भएको छ । तर, खै कुन्नि…
Dozen of हाइकूz
by As Kirati बैशाख ६, २०७७
१. हदै नरम बने, चल्छ पखाला सुकिन्छ स्वाट्टै ! २. दश्तारे बाजा ताली, दु:खमा हैन खुसीमा बज्छ ! ३. बाढी आउँछ बिगार गर्दै खोला खेत पो छैन ! ४. भमरा…
by As Kirati कार्तिक ३०, २०७६
उत्तरहीन प्रेम रातमा आकाशलाई जति हेर्छु त्यती नै धेरै ताराहरु देख्छु –के प्रेम दोस्रो पटक हुन सक्छ ?– म यै प्रश्नको उत्तरको खोजीमा थिएँ दाइले म्यासेजमा पठाइदिनु भएको उक्त प्रश्नको…